Ny tombony azo amin'ny bisikileta
Ny tombotsoan'ny bisikileta dia tsy misy farany toy ireo làlan'ny firenena izay azonao jerena tsy ho ela. Raha mieritreritra ny handray bisikileta ianao, ary handanjalanja izany raha oharina amin'ny hetsika hafa mety hitranga, dia eto izahay hilaza aminao fa ny bisikileta no vahaolana tsara indrindra. 1. Manatsara ny M ...
Ny indostrian'ny bisikileta any Sina
Tamin'ny taona 1970 tany ho any, ny fananana bisikileta toy ny "Flying Pigeon" na ny "Phoenix" (roa amin'ireo maodely bisikileta malaza indrindra tamin'izany fotoana izany) dia mitovy dika amin'ny satan'ny fiarahamonina avo sy avonavona. Na izany aza, taorian'ny fitomboana haingana nataon'i Sina nandritra ny taona maro, nitombo ny karama amin'ny sinoa manana fahefana mividy ambony ...
Fizahan-tany fizahan-tany any China
Na dia malaza be aza ny fizahan-tany amin'ny bisikileta any amin'ny firenena maro any Eropa ohatra, fantatrao fa i Shina dia iray amin'ireo firenena lehibe indrindra eto an-tany, ka midika izany fa lava lavitra noho ny eto ny halavirana. Na izany aza, taorian'ny areti-mandringana Covid-19, sinoa maro tsy afaka nandeha ...